देशकै उत्कृष्ट नेबिल बैंकप्रति प्रतिशोधपूर्ण नित्कृष्ट आक्रमण! - Himal Dainik
देशकै उत्कृष्ट नेबिल बैंकप्रति प्रतिशोधपूर्ण नित्कृष्ट आक्रमण!
काठमाडौँ ९ भाद्र २०७७, मंगलवार १८:०१
सन् १९८४ सम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा राज्यकै भूमिका बढी थियो। व्यापार व्यवसायमा सरकारका संस्थानहरुको बर्चश्व पनि थियो।
तर, राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अँगालेको नेपालमा सरकारी संस्थानहरुको प्रभावकारी व्यावसायिक योजनाको अभाव, चुस्त व्यवस्थापनको अभाव तथा भ्रष्टाचार लगायतका कारणले अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरु बिग्रदैं गएका थिए।
निरन्तर बढ्दो बजेट घाटा, व्यापार घाटा, उच्च मुद्रास्फिति, सापटी उच्च भएर गयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाका लागि विदेशी लगानी खुला गर्न लगानी सम्बन्धि कानूनहरुमा सुधार गर्ने, आयात–निर्यातका अवरोध हटाउने लगायतका क्रम क्रमशः सुरु गरे।
त्यस लगत्तै नेपालमा केही विदेशी बैंकहरु पनि भित्रिए। नेपाल अरब बैंक, इण्डोस्वेज बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड (ग्रीण्डलेज) बैंक नेपाल भित्रिए। यी सहित औंलामा गन्न सकिने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नेपालमा सक्रिय भए।
सरकारी संस्थानहरुमा जस्तै सरकारी बैंकहरुको व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुँदा चुस्त हुन सकिरहेका थिएनन्।
यही समस्या चक्रिय रुपमा बढ्दै गएर सरकारले अर्बौं रुपैँया लगानी गरेर नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई उद्दार गर्नुप-यो। नेपाल भित्रिएका केही विदेशी बैंकहरु पनि व्यवसायको आकार अपेक्षित रुपमा नपाएपछि सेयर बेचेर बाहिरिने बाध्य भए।
यी बैंकहरुको सेयर नेपाली व्यवसायीहरुले खरिद गरेर बैंक सञ्चालन गर्न थालेपछि नेपालमा बैंकिङ सेवाको रुपान्तरण भएको हो। त्यस अघिसम्म बैंकिङ सुविधा सर्वसाधरणको पहुँचमा थिएन र सेवाग्राहीहरुले सहज रुपमा सेवा पाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। एउटा चेक साट्न घण्टौं लाइन बस्नुपथ्र्यो। खाता खोल्न दुई–तीन दिन बैंकमा धाउनुपथ्र्यो। बैंकिङ सेवाको सीमित पहुँचकै कारण व्यवसाय गर्न चाहानेले कर्जा पाउनु त झनै जटिल थियो।
सरकारी बैंकमा पहुँचवालाले कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्दथे। जब नेपालकै निजी क्षेत्रले बैंक चलाउन थाल्यो त्यसपछि नेपालमा बैंकिङ सेवाको संख्यात्मकसँगै गुणात्मक सेवा पनि तीव्र रुपमा बिस्तार भयो।
नेपाली निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको बैंकहरु गुणस्तरीय र द्रुत सेवामा कुनै हिसाबले विदेशी बैंकभन्दा कम छैनन्। निजी क्षेत्रको चुस्त व्यवस्थापन, कार्यदक्षता, अत्याधुनिक प्रणाली (फिन टेक), प्रविधिको ज्ञान (टेक्निकल नो हाउ)का कारण यो सम्भव भएको हो।
यसमा अग्रगामी भूमिका नबिल बैंकले निर्वाह गरेको छ। स्थापनाको ३५ वर्षको यो यात्रामा नबिल बैंकले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। बैंकर वर्षा श्रेष्ठ आफूले नबिल बैंकबाट पहिलोपटक ऋण स्वीकृत गरेको शिवम् सिमेन्टको प्रगति देखेर नेपाली निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेका बैंकले उत्पादन, रोजगारी, सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत् अर्थतन्त्रमा पु-याएको योगदानको जति चर्चा गरेपनि कम हुने बताउँछिन्।
आजसम्म नबिल बैंकले हजारौँ व्यवसायमा खर्बौको लगानी गरेको छ। अग्रणी बैंकको हिसाबले सरकारलाई हरेक वर्ष बैंकिङ क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढि कर नबिलले बुझाउँदै आएको छ। गत आर्थिक बर्षमा नबिलले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर बुझाएको थियो।
कर्मचारीको सेवा सुविधाको सवालमा पनि नबिल बैंकले एउटा मानक कायम गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा महामारी र लकडाउनको बीच पनि नबिल बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई सात महिना बराबरको बोनस दिएको भनेर ठूलै चर्चा पनि भयो।
निजी क्षेत्रले संस्थागत गरेको बैंकिङ कल्चर, सेवा आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी छ। अर्थतन्त्रको क्रमशः विस्तारसँगै नयाँ वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालनको लागि वातावरण तयार भयो। पछि आएका निजी क्षेत्रका बैंकको नेतृत्वदायी तहका कर्मचारी नबिल र ग्रीण्डलेज बैंकका प्रडक्ट हुन्।
नबिल बैंक आज बैंकिङ क्षेत्रको पहिलो र नेतृत्वदायी बैंक बन्न सफल भएको छ। आज व्यवस्थापन, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा, कर्जाको पोर्टफोलियो, नाफा, ज्ञान र अनुभवको हस्तान्तरण, वित्तिय प्रगाढता, सरकारलाई बुझाउने राजस्व हरेक हिसाबले नबिल बैंक मुलुकको नेतृत्वदायी बैंक बन्न सफल भएको छ।
नेपाली बैंकिङ, बीमा क्षेत्रसहित अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरुलाई अवसर भएका बाह्य देशमा लगानी गरी व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने बहसका आधारमा सरकारले आज विदेशी विनियम ऐन, २०१९ मा संशोधन गर्न लागेको छ।
नेपालमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र सुदृढ क्षेत्र सम्भवतः बैंकिङ क्षेत्र नै हो। नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्र नै निजी क्षेत्रको विकासको आधार हो।
निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारमा माग हुने कर्जाको आपूर्ति गरेर, उनीहरुलाई व्यवसायिक सहयोग दिएर बैंकिङ क्षेत्रले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आकांक्षालाई सहयोग गरिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विवेकशील नियमन र बैंकिङ क्षेत्रले निकायमकीय आवश्यकताको अनुशासित पालनाबाट बैंकिङ क्षेत्र मजबुत र उत्थानशील रहेको हो। जसका कारण महाविनाशकारी भूकम्प लगत्तै पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई उठाउन बैंकिङ क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छँदैछ। हरेक बैंक नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हुन्, एक आपसमा गहिरो अन्तरसम्बन्धले समग्र वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्वलाई अड्याएको छ।
नबिल बैंकको सफलताका पछाडि नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगपति विनोद चौधरीको परिवारको लगानीसँगै चौधरीकोे मार्गदर्शन, उनको व्यवस्थापन कौशल तथा पृष्ठपोषणले आज अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई समेत प्रतिस्पर्धी बन्न सघाएको नेबिल बैंककै कतिपय वरिष्ठ अधिकारीहरु बताउँछन्।
व्यवसायिक रुपमा सबै नियामकीय मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन भएको मुलुककै अग्रणी बैंक भएकाले नबिल बैंकमाथि विभिन्न ढंगले आक्रमण भएको देखिन्छ।
व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा होस् या विश्वमै नेपाली अर्बपतिको रुपमा परिचित उद्योगपति चौधरीमाथिको राजनीतिक प्रतिशोध, जुनसुकै कारणले भएपनि यस्ता गतिविधिहरुलाई अस्वस्थ गतिविधिका रुपमा लिनु पर्दछ।।
नियामकीय मापदण्ड र अनुशासित ढंगले सञ्चालन भैरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा समेत किसिमको आक्रमणप्रति सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चनाखो हुनुपर्छ। यस्ता उद्दण्ड गतिविधिलाई सरकारले समयमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण र व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ठूलो आघात पार्नेछ।
अघिल्लोपिसीआर किटले काम गरेनः स्वाब परीक्षणमा समस्या
पछिल्लोप्रदेश नं १ मा १०९ सङ्क्रमित थप